FAAHFAAHIN:Shirkii wadatashiga dowladda Soomaaliya iyo Maamulada Dalka oo waxyaabo badan looga Hadlay – Radio Daljir
Abriil 30, 2015 6:59 b 0
Khamiis, Abriil 30, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh ayaa maanta magaalada Garoowe ka furay shirka wada-tashi ah ee u dhaxeeya dowladda Somalia iyo maamulada dalka, kaasoo oo intiisa badan looga hadlayo xaaladaha dalka uu marayo.
Waxaa shirkan goob-joog ka ahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo shirkan uu maamulkiisu martigalinayo.
Xubno ka socday dowaldaha dariska ah ,Qaramada Midoobay ,Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD ayaa goob-joog ka ahaa xafladdii furitaanka shirka oo maanta ka dhacday xarunta wasaaradda caafimaadka Puntland ee magaalada Garowe.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madasha ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in xalka Soomaaliya uu gacanta ugu jiro Soomaalida ,waxaana uu soo hadal qaaday arimo ay kamid yihiin maamul u samaynta gobollada dalka ,qaybsiga deeqaha dibadda laga helo iyo in dalka loo diyaariyo ciidamo qaran.
“Dalkeena nabadgalyo buu u baahan yahay, taasina waxa ay mas’uuliyadi ka saaran tahay dowladda Soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira, waa in amniga sidii wax looga qaban lahaa la isaga kaashado,“ ayuu sheegay madaxweynaha Somalia oo shirka furay.
Isagoo sii hadalaya ayuu intaas ku daray. “Kalsooni, is-rabid iyo isku-laab xaarnaan ayaa nabaddu ay ku timaaddaa si loo helo marka waa in la is dhagaystaa, la-isku-tagaa, la-wada fariistaa, taasi ayay kusoo laaban kartaa nabaddii iyo kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed.“
Xasan Sheekh wuxuu Puntland ku amaanay kala dambaynta ka jirta gobolka, wuxuuna ku baaqay in meel looga so wada jeesto dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, isagoo sheegay in kooxdan ay dhibaato ku haysto qaaradda oo dhan.
“Qiima weyn bay noogu fadhidaa inaan maanta halkan isugu nimid innaga oo Somali kaliya ah, mana jirto maanta cid noo maqan oo dowlad naga dhigaysaa waa inaan isku tashanaa oo meesha ka saarnaa kalsooni daradda “ ayuu isna yiri madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay shirka.
Dhinaca kale, madaxweynayaasha maamulada Jubba iyo Koonfur-galbeed ayaa labaduba wax lagu farxo ku tilmaamay in Soomaalida ay ayaahooda ka tashadaan ,waxaana shirkan uu daba-socda mid horey loogu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Ugu dambeyn, qodobbada sida gaarka ah maanta la islula soo qaaday waxaa ka mid ahaa in laga wada-shaqeeyo midnimada Soomaaliya iyo in Hiigsiga 2016-ka laga dhabeeyo, iyadoo uu jiro shaki laga qabo in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho ka sanadka 2016-ka.
Boqorka Qabiilada Zulu ee Koonfur Afrika oo dacwad laga gudbiyay